Yuusuf Garaad oo walaac ka muujiyay waqtiga ay Maxkamadda ICJ u iclaamisay Dacwadda Badda+Akhriso – Idil News
Yuusuf Garaad oo walaac ka muujiyay waqtiga ay Maxkamadda ICJ u iclaamisay Dacwadda Badda+Akhriso
Maxkamada Caalamiga ah ee Adduunka ee ICJ ayaa maanta mar kale dib u dhigtey dhageysiga dacwada muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya, iyadoona Xukuumadda Federaalka ay soo dhaweysay go’aanka Maxkamadda iyo waqtiga la iclaamiyay.
Dhageysigan ayaa markii hore la qorsheeyey in ay dhacdo 4-ta bisha November. Si kastaba, maxkamadda ayaa dib u dhigtey dhageysiga illaa iyo bisha June ee 2020, markaasi oo la dhageysan doono 8 illaa 20-ka bishaas.
Go,aanka labada jeer ay Maxkamaddu dib ugu dhigtay Dhageysiga Dacwad Badda ayaa abuurtay walaac soo food-saaray muwadiniin Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan Aqoonyahada, kuwaas oo horey u saluugsanaa qaabka Xukuumaddu shacabka uga dabooshay xaqiiqooyinka ku geedaaman arrinta Dacwadda Badda.
Dadka walaaca muujinaya waxaa kamid ah Wasiirkii Hore ee arrimaha dibedda XFS Yuusuf Garaad Cumar isagoona qoraal uu soo dhigay Barihiisa Bulshada ku yiri “Maxkamadda ICJ laba jeer ayay dib u dhigtay dhegeysiga wareegga labaad ee dacwadda ka dhanka ah Kenya ee ay Maxkamaddu ka qabatay Soomaaliya Khamiis, 28 August 2014”
Kenya ayaa labada jeerba dalbatay dib-u-dhigga. Dowladdeennu labada jeerba waxay noo sheegtay in ay diidday in dhegeysiga dib loo dhigo. Waase looga guuleystay.
Yuusuf Garaad ayaa tilmaamay in waqtigan cusub ee Maxkamaddu iclaamisay Dhageysiga Dacwadda uu yahay mid xasaasi ah dhanka Soomaaliya, maadama ay galayso Doorasho “Ma jiro xilli Soomaaliya uga xun madasha hadda la qabtay oo ah usbuuca labaad ee June 2020”.
“Sida ay ballanta dhexdeennu ahayd waa xilli doorasho guud oo labada Aqal ee Baarlamaanka iyo Madaxweyne. Ballantaana waa ay og yihiin Kenya, qareennada labada dhinac iyo Garsoorayaasha ICJ”
Ugu dambeyntii, Yuusuf Garaad ayaa sheegay in Ballanta cusub ee ay qabatay Maxkamaddu waqtigeeda uusan u rooneyn Dalka “U heellanaanta Dacwadda iyo Madaxbannaanida doorashada labada midna uma roona ballanta la qabtay”.